Kooxda Barcelona oo xiiseynaysa xiddiga khadka dhexe ee Man United, Nemanja Matic – Gool FM
Haaruun October 17, 2021
(Manchester) 17 Okt 2021. Kooxda kubadda cagta Barcelona ee ka dhisan dalka Spain ayaa la soo warinayaa inay xiiseynayso saxiixa xiddiga khadka dhexe ee Manchester United, Nemanja Matic.
Wargeyska The Sun ee ka soo baxa dalka Ingiriiska ayaa warinaya in laacibka khadka dhexe ee Manchester United, Nemanja Matic uu xiiso ka helayo Kooxda Barcelona.
Naadiga reer Spain ayaa bartilmaameedsanaysa haatan xiddigo qiimo jaban ama ay qiimo yar ku heli karto, maadaama ay la dhibtoonayso xiisad dhaqaale oo joogto ah, iyadoo Tababare Ronald Koeman uu doonayo inuu xoojiyo dooqyadiisa khadka dhexe.
Matic ayaa lagu heli karaa wax ka yar 10 milyan oo gini xagaaga soo aaddan, markaasoo kaliya hal sano uga harsan tahay qandaraaskiisa garoonka Old Trafford.
Barca ayaa wadahadal la furtay xagaagii Georginio Wijnaldum kaddib markii xiddiga reer Holland uu ogolaaday inuu ka tago Kooxda Liverpool, laakiin Paris Saint-Germain ayaa ku daraacday saxiixiisa.
Haatan waxa ay Kooxda ka arrimisa garoonka Camp Nou ee Barca doonaysaa saxiixa Matic kaasoo kooxda Manchester United kaga soo dhaqaaqay Chelsea xagaagii 2017-kii.
Kooxda Barcelona oo haatan fadhisa kaalinta sagaalaad ee horyaalka La Liga, ayaa wajihi doonta saddex kulan oo toos ah oo ay gurigeeda ku ciyaareyso muddo toddobaad gudahiis ah.
Valencia ayaa caawa oo Axad ah soo booqan doonta garoonka Nou Camp, ka hor inta aysan Wiilasha Tababare Ronald Koeman marti gelin Dynamo Kiev, iyagoo rajaynaya inay qaataan guushoodii ugu horreysay ee Champions League fasal ciyaareedkan 2021-22 ka hor inta aysan Axadda soo aaddan soo dhoweynin Real Madrid kulanka El Clasico.